Salah Jamal Khashoggi Oo Ah Curadkii Uu Dhalay Suxufigii La Dilay Ee Jamaal Khashoggi Oo Maraykanka Ka Dagay Iyo Sababta | Berberatoday.com
Salah Jamal Khashoggi Oo Ah Curadkii Uu Dhalay Suxufigii La Dilay Ee Jamaal Khashoggi Oo Maraykanka Ka Dagay Iyo Sababta
October 26, 2018 - Written by Berbera Today
Riyad(Berberatoday.com)-Wiilka u wayn carruur saxafigii la dilay ee Sacuudiga u dhashay Jamal Khashogji ayaa ka dagay dalka Maraykanka isaga oo ka baxay Sacuudiga xubno qoyskiisa ka tirsanna ay weheliyaan.
Saalax Khashoqji ayaan horay awood ugu lahayn in uu ka baxo Sacuudi Carabiya, maadaama oo aabihii uu dhaliili jiray boqortooyada Sacuudiga.
Talaadadii ayaa sawir laga qaaday iyadoo uu u tacsiyaynayo dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan.
Jamal Khashqji ayaa lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul saddex toddobaad ka hor.
Dacwad oogaha guud ee Sacuudiga ayaa Khamiistii sheegay in dhimashada Khashoqji lasii qorsheeyay.
Masuuliyiinta Sacuudiga ayaa iyaguna ku tilmaamay in dad “aan daacad ahayn” ay ka dambeeyay dilka iyadoo Riyadh ay ku adkaatay in faahfaahin looga qaateen ah ay ka bixiso sida saxafi Jamal Khashoqji uu mawtka ula kulmay.
Sacuudi Carabiya ayaa markii hore ku adkaysatay in saxafigan oo Maraykanka daganaansho ka haystay, waxna ku qori jiray wargayska Washington Post uu qunsuliyadda ka baxay isaga oo “nabad qaba” 2 bishii Oktoobar, haddana waxay sheegeen in uu gacan qaad u dhintay.
Baareyaasha Turkiga oo diiday in laga duubo ayaa sheegay in amiirka dhaxalka leh uu wax ka ogaa waxa socday. Riyadh ayaa diiday in ay door ku lahayd dilka.
Saalax Khashoqji ayaa si kooban u salaamay amiirka dhaxalka leh Maxamed Bin Salxaan, dad badan ayaana u arkay in uu si qabaw u wajahay Talaadadii intii uu socday kulanka la qorsheeyay.
Dadka qaarkood waxay tilmaamayaan in kulankaasi uu u horseeday in loo ogolaado in uu dalka ka baxo.
Afhayeen u hadlay Maraykanka ayaa sheegay in xoghayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu masuuliyiinta Sacuudiga u sheegay in uu doonayo in Saalax Khashoqji oo dhalasha labada dal haysta uu ku laaban karo Maraykanka isla markaasna “uu ku farxay” in loo ogolaaday in uu sidaa yeelay.